Usoro na ọnọdụ na amụma nzuzo - Countgụda Alaeze ahụ
Nkwekọrịta Banyere Iji Weebụsaịtị a
Enyere webụsaịtị a dịka ụzọ nkwukọrịta, mmụta, ike mmụọ nsọ na ozi. Site na Countdown na the Kingdom na-arụkwa ya.
Ihe niile dị na weebụsaịtị a, gụnyere ma ọnweghị oke, ọdịnaya ya, ide ihe, eserese, eserese, yana koodu kọmputa yana ngwa nwebisiinka site na Countdown na Kingdom ma ọ bụ ndị ọzọ.
Nwere ike ibudata ihe dị na saịtị a maka naanị onwe gị, nke na-abụghị nke azụmahịa, ma ọ bụrụhaala na edobere ikike nwebiisinka na ọgụgụ isi ndị ọzọ jikọtara ya na ihe ebudatara. Agaghị echekwa ngwa ahịa a n'ime komputa belụsọ maka ojiji nkeonwe yana nke anaghị emebi emebi.
Maynweghi ike ịgbanwe, mepụtaghachi, mụtapụtagharị, weghachite, bulite, repost, nyefee, kesaa, ma ọ bụ jigharịa n'ụzọ ọ bụla site na weebụsaịtị a, gụnyere, mana ọnweghị oke na koodu, sọftụwia, ederede, onyonyo, akara njiri mara, vidiyo. na / ma ọ bụ ọdịyo, site na usoro ọ bụla dị adị ma ọ bụ ka achọpụtabeghị.
Amachibidoro Mkpebi nke Iji Ihe
Ikwesiri kwanyere ahia ahia nile, nwebiisinka, akara akara aka, akara ngosi, na ikike ndi nwere ọgụgụ isi ha na weebụsaịtị a, ma akara ụghalaahịa ndị a, akara ngosipụta, na akara ma ọ bụ akara ndị a gụnyere na Ngụgụ nke Alaeze, ma ọ bụ ikike sitere na ndi nke ato. Maynwere ike iji akara a, akara ụghalaahịa, akara ọrụ, ikikere, ma ọ bụ ọdịnaya websaịtị a na-enweghị nkwupute ederede edepụtara nke Alaeze.
Enyere ikike n’aka Queen nke Peace Media
Ọ bụrụ n’etinye ma ọ bụ tinye ozi, ntinye, data, na / ma ọ bụ aro ndị jikọtara ọnụ na Countdown na Kingdom ma ọ bụ otu ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa anyị, ị na-enye ikike ikike ọgụgụ isi dị na ngụkọta ahụ na Nguko nke Alaeze ahụ. A ga-elele akwụkwọ ahụ anya dị ka ihe na-abụghị ihe nzuzo, na Ngukọta nke Alaeze ahụ nwere ike iji echiche ọ bụla, nkwupụta, na akụrụngwa n'ụzọ ọ bụla ọ chọrọ, gụnyere, mana ọnweghị mmụpụta, ịkọwapụta, na mbipụta site na usoro ọ bụla ugbu a ma ọ bụ na ọ ka ga-adị. chepụtara.
Ikike enyere ikike bụ enweghị ikike eze, ọ bụla ebighi ebi, enweghị ya, yana enweghị ike, yana ịgaghị, ikike ikikere, ire, nwebisiinka, ụghalaahịa, akara ejiri mara, na ihe gbasara ya.
Amụma nzuzo na Ndepụta
Ọ bụrụ n’inye Countlọ Nchịkwa Alaeze na adreesị ozi ịntanetị gị iji debanye aha maka Nọmba na akwụkwọ akụkọ Kingdom, Countdown to the Kingdom ga-eji ozi ịntanetị gị zitere gị naanị akwụkwọ akụkọ. Amụma nke Countdown to the Kingdom abụghị ịnye adreesị ozi-e gị ma ọ bụ ozi gị nye ndị ọzọ.
Nguko nke ala eze nwere ike inye uzo nke webusaiti ndi ozo, ma obu kwuo webusa webusaiti nke ndi ozo no. Mgbe ị jiri webụsaịtị a ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla jikọrọ ma ọ bụ kpọtụrụ aha na weebụsaịtị a, ị na - eme ya n'ihe gbasara gị. Ngụkọta nke Alaeze ahụ anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ na-ejikwa saịtị ndị ọzọ a, yabụ na-enweghị nkwa, na-egosi ma ọ bụ gosipụta, banyere ihe ọ bụla achọtara na saịtị ndị ọzọ ndị a.
Ngụkọta nke Alaeze agaghị enyere anyị aka na weebụsaịtị a, ihe ndị mejupụtara ya, ma ọ bụ ọrụ ya agaghị akwụsị akwụsị ma ọ bụ enweghị njehie. Nguko nke ala eze adighi ekwenye na webusaiti a ma obu webusaiti obula jikotara na webusaiti a
N'ọnọdụ ọ bụla ndị mmekọ nke Countdown na Kingdom, ma ọ bụ ndị ọzọ nyere aka mepụta, mepụta, nyefee ma ọ bụ rụọ ọrụ webụsaịtị a, ga-adị maka mbipụta ọ bụla, na-apụtachaghị ìhè, ihe na-adabaghị adaba, ma ọ bụ nsonaazụ ọ bụla na-esite na ojiji ahụ. nke, ma ọ bụ enweghị ike iji Ngụgụ gaa na weebụsaịtị nke Kingdom ma ọ bụ ihe ndị mejupụtara ya, maka ebumnuche ọ bụla, gụnyere nlele. Site n'iji webụsaịtị a ị kwenyere ma kwenye na ọnụ ọgụgụ nke Alaeze ahụ agaghị arụ maka omume ọ bụla site n'aka onye ọrụ ọ bụla. Site n'iji weebụsaịtị a kwenye na ikwenye na usoro niile nke nkwekọrịta a.
Ọ bụrụ na enyere ndenye ọ bụla nke nkwekọrịta a ghara ịdị ire, ụdị arụghị ọrụ a agaghị emetụta ndokwa ndị enwere ike inye aka na-enweghị ụdị adịghị adị.
A ga-achịkwa nkwekorita a ma tinyekwa ya n'ọrụ dịka iwu steeti California si dị, ebe mgbakwunye maka ihe ọ bụla ga-abụ Sacramento County, California.